Fahamendrehana kolikoly marobe avy amin'ny NRW. Ny praiminisitra Laschet miaraka amin'ny zanany lahy anaty fotaka lalina tanteraka. Manodidina ny antsasaky ny arivo tapitrisa euro ny fitambarany.
Ny governemantam-panjakana dia tsy nanana afa-tsy ny akora hita mba hanamarinana ireo smocks. Armin Laschet dia voatsikera noho ny raharaha sarontava izay natomboka tamin'ny akanjo fiarovana
Ny loka fifanarahana mampihetsi-po ho an'ny akanjo Corona any North Rhine-Westphalia dia mampiseho ny halehiben'ny ahiahin'ny governemanta tamin'ny lohataona momba ny fialana amin'ny akanjo fiarovana. Ny fanarenana ny minisitry ny fahasalamana tompon'andraikitra dia manambara antsipiriany mampiahiahy.
Karl-Josef Laumann (CDU) dia naniry ny hamafa ity raharaha mandreraka ity - indrindra ny ahiahy ho amin'ny nepotisme izay nokolokain'ny mpanohitra nandritra ny herinandro maro. Ny minisitry ny fahasalamana tany Rhine-Westphalia Avaratra dia niresaka mafy, toy ny mahazatra, ary nanisy fanamarihana mahatsikaiky vitsivitsy. Fa indrindra ny SPD tsy nilavo lefona.
Naharitra adiny roa teo ny faharetan'ny fanontaniana tamin'ny herinandro lasa teo. “Nanao zavatra araka ny fahalalantsika sy ny zavatra inoanay izahay. Azoko atao ihany koa ny manilika ny karazana kolikoly sy ny toa izany. Azoko antoka izany, ”hoy i Laumann.
Izy io dia momba ny fifanolanana an-tapitrisany dolara niadian-kevitra teo amin'ny fanjakana sy ny orinasan-damba izay nateraky ny zanaky ny praiminisitra Armin Laschet (CDU) an'ny olona rehetra. Amin'ny maha bilaogera lamaody azy dia manolotra entana avy amin'ny orinasa Mönchengladbach van Laack amin'ny Internet ihany koa i Joe Laschet ary nampita ny nomeraon-telefaona avy amin'ny boss Christian von Daniels ho an'ny rainy. Raha ny marina dia nitory tamin'ny mpandraharaha i Armin Laschet ny harivan'iny Alahady iny, ny 29 martsa teo, ary niresaka momba ny saron-tava fiarovana izy ireo, satria ilaina maika izy ireo amin'ny fiandohan'ny areti-mandringana corona.
Andro vitsy taty aoriana, tonga nizaha ny fitaovana ireo mpiasan'ny fanjakan'ny fanjakana, ary tamin'ny faran'ny volana aprily dia nisy sonia niaraka tamin'ny vola mitentina 45 tapitrisa euro, saingy tsy natao ho saron-tava, fa akanjo lava miaro folo tapitrisa. Tsy nisy dokam-barotra. Amin'ny vanim-potoana mahazatra, dia raharaha mahamenatra izany. Na izany aza, ny lohataona ny 2020 dia toe-javatra miavaka izay tsy nampiharina ny fomba mahazatra. Nisy ihany koa ny didim-panjakana avy amin'ny fanjakana izay mamela ny fifanarahana homena amin'ny areti-mandringana tsy misy tolotra.
Mbola mahita olana eo amin'ny orinasa ny mpanohitra, satria raha ny fijerin'izy ireo dia aleony van Laack toy izay ny fatiantoka ataon'ny orinasa lamba hafa. Ny mpitarika ny vondrona parlemantera SPD Thomas Kutschaty dia mihevitra ny fomba fiasa ao amin'ny van Laack ho "fitondran-tena izay manitsakitsaka ny fitsipiky ny fitondrana tsara". "Tsy ara-dalàna" ihany koa io, satria na dia misy filana lehibe indrindra aza, farafahakeliny tolotra telo mifaninana no tokony ho azo, hoy izy tao amin'ny antenimieram-panjakana tamin'ny herinandro lasa teo.
Tsy tokony hisy orinasa iharan'ny fatiantoka satria manaraka ny lalàna sy ny lalàna ary tsy misy orinasa tokony hanana tombony amin'ny fifaninanana "satria manana ny alàlan'ny filohan'ny governemanta irery". Ho an'i Van Laack dia nisy ny fifanarahana azo atao "tsy ho an'ny orinasa hafa izany". Ireo fiampangana ireo dia izao dia i Laschet, izay te-hanamafy ny tenany amin'ny tolona ho filoham-pirenena CDU sy ny filatsahan-kofidina ho an'ny chancellor.
Ny resabe manodidina ny orinasa Van Laack dia ohatra iray izay mitranga rehefa tsy manan-kery intsony ireo torolàlana azo ampiharina hialana amin'ny fanararaotana toe-javatra vonjy maika ary tsy tokony hisy hiasa saina momba ny fandinihana marina ny baiko. Ny fahatsapana teo amin'ireo olona voarohirohy fa ny fomba fanao toa an'i Van Laack dia mety nesorina.
Ny minisitry ny fahasalamana Laumann, izay ny tranony no niandraikitra ny orinasa niaraka tamin'i van Laack, dia tsy te-hahita zavatra maharatsy na ratsy eo amin'ny orinasa. Tamin'ny fotoana nanontaniana dia nampatsiahy ny toe-javatra tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana ny Christian Democrat. Tamin'izany fotoana izany dia nisy ny "tsy fahampian'ny fitaovana fiarovana": "Tamin'izany fotoana izany dia tena nila olona."
Nampiahiahy ny ankamaroan'ny tolotra
Nahazo tolotra an-jatony isan'andro ny minisitera, manodidina ny 7000 ny fitambarany, ary mampiahiahy ny ankamaroan'izy ireo. Ekipa misy olona 30 ao an-tranony no nikarakara azy io, tsy manana traikefa amin'ny olana amin'ny fividianana entana, amin'ny tsindry hazo lena lehibe. “Nanao izay azo natao izahay. Satria tsy te hamaly aho fa lany ny fitaovana fiarovana anay. Heveriko fa azonareo daholo izany, ”hoy i Laumann. Nolazainy mazava koa fa ny van Laack dia iray amin'ireo mpifanaraka marobe.
Ny fanjakana dia nanidy ny baiko hiarovan-tena miaraka amina orinasa 40 eo anelanelan'ny volana febroary sy ny fiandohan'ny volana Mey, izay mitentina efa ho antsasaky ny miliara euro. Laumann dia nilazalaza ny fanamaivanana lehibe rehefa niantso azy i Laschet taorian'ny antso an-tariby niaraka tamin'ilay mpandraharaha: "Nahatsapa fahatsapana tsara fotsiny aho rehefa nody mandry fa misy farany famaranana hahazoana akanjo miaro."
Na eo aza izany, mihamazava hatrany fa i Van Laack dia nahazo fanohanana manokana tamin'ny antso an-tariby nomen'ny praiminisitra manokana momba ilay asa nampanaovina izay tsy tokony nananan'ny orinasa hafa. Araka ny fantatsika, tsy niantso an-tsokosoko mpandraharaha hafa i Laschet. "Amin'ny ankapobeny tsy misy fampahalalana momba ny resaka izay tsy ataon'ny praiminisitra ampahibemaso," hoy i Laumann.
Tamin'ny sarimihetsika no resahina voalohany, araka ny asehon'ireo mpandraharaha sy ny praiminisitra. “Tamin'izany fotoana izany dia tsy afaka namokatra sarontava izay manana kalitaon'ny saron-tava FFP2 ny orinasa van Laack. Niresaka tamin'ny orinasa izahay ary ny vokatr'izany dia ny fampivoarana ny akanjo fiarovana. Toy izany no fandehany ”, hoy i Laumann tao amin'ny Fanontaniana. Saingy van Laack dia tsy afaka nampiseho akanjo fiarovana ho an'ny fizahana, lamba ihany. Araka ny voalazan'i Laumann, ity fitaovana tsy voamarina ity dia hitan'ny Ivon-toerana misahana ny fiarovana ny asa ho manana kalitao ampy, farafaharatsiny mandritra ny vanim-potoanan'ny aretina.
Mijanona ny fanontaniana raha toa ka, amin'ny fifanakalozana mitovy amin'izany amin'ny minisitera, orinasa iray hafa no afaka namatsy akanjo fiarovana toy izany. Sarotra ny fanarenana azy raha jerena, fa toa tsy nisy eritreritra akory tamin'ny lohataona. Nilaza kosa i Laumann fa ampy ny fifandraisana amin'i van Laack.
"Angamba kely ny toe-tsaina ananan'ny Westphalian tsara iray: raha miresaka tsara amin'ny olona iray aho dia tsy mitondra fiara indroa - tsy haiko hoe inona ny antony." Laumann dia midika eto fa tsy misy mpanamboatra hafa nangatahina. Na ahoana na ahoana, tsy nisy fikasana tao ambadik'izany. Tamin'ny fotoana nanontaniany dia nanontany ny depiote SPD ny antony tsy nifandraisan'ny governemantam-panjakana tamin'ny orinasa Seidensticker tao Bielefeld.
Seidensticker dia nanao tolotra
Somary tezitra i Laumann: “Mazava ho azy fa afaka nankany koa ianao. Mifanohitra amin'izay, tsy maintsy milaza ihany koa aho fa ny orinasa malaza any Rhine-Westphalia Avaratra dia tokony ho fantany koa hoe iza no minisitry ny fahasalamana eto. Afaka niresaka tamiko koa ianao. "
Seidensticker dia tena nanao tolotra ho saron-tava isan'andro, fa ny minisiteran'i Laumann kosa tsy afaka nampiasa izany. Toa tsy nisy intsony ny fifanakalozana. “Tsy misy praiminisitra, tsy misy minisiteran'ny fahasalamana ary tsy misy tompon'andraikitra ambony antsoina hoe Seidensticker. Tsy misy miantso any, amin'ny mpanamboatra lamba lehibe indrindra eto amin'ny firenentsika, ”hoy ny tsikera nataon'ny mpitarika ny vondrona parlemantera SPD, Kutschaty.
Van Laack izao dia nahazo baiko roa hafa ho an'ny saron-tava fiarovana ho an'ny polisy, indray ary tsy nisy fangalaram-panafody, ity indray dia nohamarinina tamin'ny fivoarana tsy ampoizina amin'ny areti-mandringana. Mandinika ny fitarainan'ny orinasa iray manohitra ny iray amin'ireto fifanarahana ireto ny Chambre d'exploitation Rhineland Public. Avy amin'i Laumann dia nidina ity teny nalaina ity, izay taorian'ny “areti-mandringana” dia “tsy nanana ny birao fanaraha-maso ny fanjakana 'nanao hadalana', dia nanao ny tsy mety rehetra”
Ho an'ny orinasa tenany, ny fampandrosoana dia toa fahombiazana lehibe. Nilaza i Laumann tao amin'ny fanontaniam-potoana fa faly izy fa ny van Laack dia namorona ny akanjo fiarovana ary "azo antoka fa lasa mpamatsy fitafiana miaro amin'ny tsena mahazatra ho an'ny klinika fanta-daza ao amin'ny fanjakan'ny Rhine-Westphalia Avaratra".